မြန်မာအိုင်ဒေါမှာ တစ်ကျော့ပြန် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမယ့်သူ ..? - APANNPYAY
Home / Myanmar Idol / အဆိုတော်များ / မြန်မာအိုင်ဒေါမှာ တစ်ကျော့ပြန် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမယ့်သူ ..?
မြန်မာအိုင်ဒေါမှာ တစ်ကျော့ပြန် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမယ့်သူ ..?
Apann Pyay 2:22 PM Myanmar Idol , အဆိုတော်များ Edit
ယနေ့ည ၉ နာရီတွင် ပြုလုပ်မည့် Myanmar Idol ပြိုင် ပွဲ၌ Pantene Wild Card ဖြင့် ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမည့် ပြိုင် ပွဲဝင်မည်သူဖြစ်မည်ကို ပရိသတ် များက စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။
Pantene Wild Card ဖြင့် ပြန်လည်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမည့်သူကို ပရိသတ်များ၏ မဲပေးမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး Myanmar Idol ၏ တရား ဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ပေးထားသည့် လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မတ်လ ၃ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ သော Top5Result Show အပြီး တွင် မဲစတင်ကောက်ခံခဲ့ပြီး မဲပေး ချိန်ကို မတ်လ ၄ ရက် ညနေ ၆ နာရီနောက်ဆုံးထား သတ်မှတ်ခဲ့ သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်အ တွက် လင့်ခ်ပေးထားသည့် Myanmar Idol ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာ မျက်နှာနှင့် Pantene ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွင် ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ခွာ သွားရသော ရဲနောင်၊ ဇင်ကြီးနှင့် ယွန်းတို့အား မဲပေးမည်ဟု မှတ် ချက်ပြုရေးသားထားသူ များပြား ခဲ့သည်။
မြန်မာအိုင်ဒေါ ဆန်ခါတင် ၁၀ ဦးစာရင်းကတည်းက ပရိ သတ်မဲအရေအတွက် အများဆုံး ရရှိခဲ့သူ ရဲနောင်သည် Pantene Wild Card ဖြင့် ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင် ရမည့် အဆိုပါအစီအစဉ်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ် သည်။ ဆန်ခါတင် ငါးဦးအဆင့် အထိ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ရဲနောင်သည် ဆန်ခါတင်လေးဦး ရွေးချယ်သည့်အဆင့်တွင် ပရိ သတ်မဲအနည်းဆုံးရရှိသော ကြောင့် ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ခဲ့ရသော် လည်း နှုတ်ဆက်ညတွင် မူလယှဉ် ပြိုင်ခဲ့သော သီချင်းကို အကောင်း ဆုံးသီဆိုနိုင်ခဲ့သလို အပြုံးဖြင့် နှုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့် ပရိသတ်များ၏ ကရုဏာကို ရရှိခဲ့ သည်။ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် မဲအ များဆုံးရရှိသူတစ်ဦးအနေဖြင့် မဲ အနည်းဆုံးရရှိ၍ ပြိုင်ပွဲမှ ထွက် ခွာခဲ့ရသည့်အပေါ် ရဲနောင်ကိုယ် တိုင် ပရိသတ်များကို ၎င်းအတွက် မဲမပေးရန် ပြောဆိုခဲ့သည်ဆို သည်ဟု ရဲနောင်၏ အမာခံ ပရိ သတ်အချို့က ပြောကြားမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ရဲနောင်ကိုယ် တိုင်ကလည်း Pantene Wild Card အတွက် ဇင်ကြီးကို မဲပေး ရန် ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ တွင် ရေးသားထားသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်များတွင် ပရိသတ် အနည်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ပြိုင် ပွဲက ထွက်ခွာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည့် ဇင်ကြီးကို ပရိသတ်များ ပို၍သတိပြုမိခဲ့ကြ သည်။ ထို့အပြင် ဇင်ကြီး၏ အနုပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုလည်း မျှဝေမှုများရှိခဲ့ သောကြောင့် Pantene WildCard ဖြင့် ပြန်လာရမည့်သူစာရင်း တွင် ဇင်ကြီးကိုလည်း ချန်လှပ် ထား၍ မရနိုင်ပေ။ ထို့အပြင် ပြိုင်ပွဲ၌ အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူများဖြစ်သည့် ရဲနောင်နှင့် ချမ်းငြိမ်းတို့ကလည်း ဇင်ကြီးအတွက် မဲပေးရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ပြောကြားထားသည်။
ဇင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း ‘‘Pantene Wild Card ဆိုတာရှိ တယ်တော့ ကြားနေရပါတယ်။ အခွင့်ရရင် ပြန်သွားချင်ပေမယ့် မျှော်တော့မမျှော်လင့်ရဲပါဘူး ဗျာ’’ဟု မတ်လ ၃ ရက်က ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ရေး သားထားသည်။
ယခုနှစ် မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင် ပွဲတွင် အသက်အငယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲ ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ယွန်းကလည်းပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူ တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် PanteneWild Card ဖြင့် ပြန်လည်ပါဝင် လာနိုင်မည်လား ဆိုသည်မှာ လည်း စဉ်းစားရမည့်အချက်တစ် ခုဖြစ်သည်။ ယွန်းသည် ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်တွင် Follower သုံးသိန်း ကျော်ရှိပြီး မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲ ဝင်များအနက် Follower အများ ဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကြောင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှတစ်ဆင့် မဲပေးရသည့်အချက်သည် ယွန်း အတွက် အားသာချက်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မဲပေးခွင့်ရှိ သည့် မတ်လ ၄ ရက်က ယွန်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် Live လွှင့်ခဲ့ရာကြည့်ရှုသူ သုံးသိန်းကျော်ရှိခဲ့ သည်။
အခြားပြိုင်ပွဲဝင်များဖြစ် သည့် အေမီဈာန်၊ ဖြူလေး၊ ချမ်း ငြိမ်းတို့ကို မဲပေးသူများရှိသော် လည်း အရေအတွက်နည်းပါး သည်ကို မဲပေးရမည့် လင့်ခ်များ ကို ညွှန်းပေးထားသည့် MyanmarIdol နှင့် Pantene Myanmar ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်များတွင် မှတ်ချက် များကိုကြည့်၍ သိနိုင်သည်။ ထို့ ကြောင့် ယနေ့ည Myanmar Idol ဆန်ခါတင်လေးဦးဖြစ်သည့် သား ငယ်၊ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း၊ ပိုးမီ၊ ဘီလီ လမင်းအေးတို့နှင့်အတူ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်သူမှာ ရဲနောင်၊ ဇင် ကြီးနှင့် ယွန်းတို့သုံးဦးမှ တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းနေကြ သည်။
ယနညေ့ ၉ နာရီတှငျ ပွုလုပျမညျ့ Myanmar Idol ပွိုငျ ပှဲ၌ Pantene Wild Card ဖွငျ့ ပွနျလညျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရရှိမညျ့ ပွိုငျ ပှဲဝငျမညျသူဖွဈမညျကို ပရိသတျ မြားက စိတျဝငျစားနကွေသညျ။
Pantene Wild Card ဖွငျ့ ပွနျလညျပါဝငျယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိမညျ့သူကို ပရိသတျမြား၏ မဲပေးမှုဖွငျ့ ရှေးခယျြခွငျးဖွဈပွီး Myanmar Idol ၏ တရား ဝငျဖစျေ့ဘှတျချစာမကျြနှာတှငျ ပေးထားသညျ့ လငျ့ချမှတဈဆငျ့ မဲပေး၍ ရှေးခယျြခွငျးဖွဈသညျ။
မတျလ ၃ ရကျက ပွုလုပျခဲ့ သော Top5Result Show အပွီး တှငျ မဲစတငျကောကျခံခဲ့ပွီး မဲပေး ခြိနျကို မတျလ ၄ ရကျ ညနေ ၆ နာရီနောကျဆုံးထား သတျမှတျခဲ့ သညျ။ အဆိုပါ အစီအစဉျအ တှကျ လငျ့ချပေးထားသညျ့ Myanmar Idol ဖစျေ့ဘှတျချစာ မကျြနှာနှငျ့ Pantene ဖစျေ့ဘှတျချ စာမကျြနှာတှငျ ပွိုငျပှဲမှ ထှကျခှာ သှားရသော ရဲနောငျ၊ ဇငျကွီးနှငျ့ ယှနျးတို့အား မဲပေးမညျဟု မှတျ ခကျြပွုရေးသားထားသူ မြားပွား ခဲ့သညျ။
မွနျမာအိုငျဒေါ ဆနျခါတငျ ၁၀ ဦးစာရငျးကတညျးက ပရိ သတျမဲအရအေတှကျ အမြားဆုံး ရရှိခဲ့သူ ရဲနောငျသညျ Pantene Wild Card ဖွငျ့ ပွနျလညျယှဉျပွိုငျ ရမညျ့ အဆိုပါအစီအစဉျအတှကျ ဖွဈနိုငျခွအေရှိဆုံးသူတဈဦးဖွဈ သညျ။ ဆနျခါတငျ ငါးဦးအဆငျ့ အထိ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့သညျ့ ရဲနောငျသညျ ဆနျခါတငျလေးဦး ရှေးခယျြသညျ့အဆငျ့တှငျ ပရိ သတျမဲအနညျးဆုံးရရှိသော ကွောငျ့ ပွိုငျပှဲမှ ထှကျခဲ့ရသျော လညျး နှုတျဆကျညတှငျ မူလယှဉျ ပွိုငျခဲ့သော သီခငျြးကို အကောငျး ဆုံးသီဆိုနိုငျခဲ့သလို အပွုံးဖွငျ့ နှုတျဆကျနိုငျခဲ့သူဖွဈသောကွောငျ့ ပရိသတျမြား၏ ကရုဏာကို ရရှိခဲ့ သညျ။ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ မဲအ မြားဆုံးရရှိသူတဈဦးအနဖွေငျ့ မဲ အနညျးဆုံးရရှိ၍ ပွိုငျပှဲမှ ထှကျ ခှာခဲ့ရသညျ့အပျေါ ရဲနောငျကိုယျ တိုငျ ပရိသတျမြားကို ၎င်းငျးအတှကျ မဲမပေးရနျ ပွောဆိုခဲ့သညျဆို သညျဟု ရဲနောငျ၏ အမာခံ ပရိ သတျအခြို့က ပွောကွားမှုမြား ရှိခဲ့သညျ။ ရဲနောငျကိုယျ တိုငျကလညျး Pantene Wild Card အတှကျ ဇငျကွီးကို မဲပေး ရနျ ၎င်းငျး၏ ဖစျေ့ဘှတျချစာမကျြနှာ တှငျ ရေးသားထားသညျ။
ပွိုငျပှဲဝငျမြားတှငျ ပရိသတျ အနညျးဆုံးဖွဈသောကွောငျ့ ပွိုငျ ပှဲက ထှကျခှာခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျဟု ပွောကွားခဲ့သညျ့ ဇငျကွီးကို ပရိသတျမြား ပို၍သတိပွုမိခဲ့ကွ သညျ။ ထို့အပွငျ ဇငျကွီး၏ အနုပညာနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျမြားကိုလညျး မြှဝမှေုမြားရှိခဲ့ သောကွောငျ့ Pantene WildCard ဖွငျ့ ပွနျလာရမညျ့သူစာရငျး တှငျ ဇငျကွီးကိုလညျး ခနျြလှပျ ထား၍ မရနိုငျပေ။ ထို့အပွငျ ပွိုငျပှဲ၌ အတူယှဉျပွိုငျခဲ့သူမြားဖွဈသညျ့ ရဲနောငျနှငျ့ ခမျြးငွိမျးတို့ကလညျး ဇငျကွီးအတှကျ မဲပေးရနျ ဖစျေ့ဘှတျချတှငျ ပွောကွားထားသညျ။
ဇငျကွီးကိုယျတိုငျကလညျး ‘‘Pantene Wild Card ဆိုတာရှိ တယျတော့ ကွားနရေပါတယျ။ အခှငျ့ရရငျ ပွနျသှားခငျြပမေယျ့ မြှျောတော့မမြှျောလငျ့ရဲပါဘူး ဗြာ’’ဟု မတျလ ၃ ရကျက ၎င်းငျး၏ ဖစျေ့ဘှတျချစာမကျြနှာတှငျ ရေး သားထားသညျ။
ယခုနှဈ မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျ ပှဲတှငျ အသကျအငယျဆုံးပွိုငျပှဲ ဝငျတဈဦးဖွဈသညျ့ ယှနျးကလညျးပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားသူ တဈဦးဖွဈသောကွောငျ့ PanteneWild Card ဖွငျ့ ပွနျလညျပါဝငျ လာနိုငျမညျလား ဆိုသညျမှာ လညျး စဉျးစားရမညျ့အခကျြတဈ ခုဖွဈသညျ။ ယှနျးသညျ ဖစျေ့ ဘှတျချတှငျ Follower သုံးသိနျး ကြျောရှိပွီး မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲ ဝငျမြားအနကျ Follower အမြား ဆုံး ပွိုငျပှဲဝငျတဈဦးဖွဈသော ကွောငျ့ ဖစျေ့ဘှတျချမှတဈဆငျ့ မဲပေးရသညျ့အခကျြသညျ ယှနျး အတှကျ အားသာခကျြတဈခုပငျ ဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ မဲပေးခှငျ့ရှိ သညျ့ မတျလ ၄ ရကျက ယှနျး၏ဖစျေ့ဘှတျချတှငျ Live လှငျ့ခဲ့ရာကွညျ့ရှုသူ သုံးသိနျးကြျောရှိခဲ့ သညျ။
အခွားပွိုငျပှဲဝငျမြားဖွဈ သညျ့ အမေီဈာနျ၊ ဖွူလေး၊ ခမျြး ငွိမျးတို့ကို မဲပေးသူမြားရှိသျော လညျး အရအေတှကျနညျးပါး သညျကို မဲပေးရမညျ့ လငျ့ချမြား ကို ညှနျးပေးထားသညျ့ MyanmarIdol နှငျ့ Pantene Myanmar ၏ ဖစျေ့ဘှတျချမြားတှငျ မှတျခကျြ မြားကိုကွညျ့၍ သိနိုငျသညျ။ ထို့ ကွောငျ့ ယနညေ့ Myanmar Idol ဆနျခါတငျလေးဦးဖွဈသညျ့ သား ငယျ၊ မိုငျးမိုငျဆိုငျး၊ ပိုးမီ၊ ဘီလီ လမငျးအေးတို့နှငျ့အတူ ပါဝငျ ယှဉျပွိုငျရမညျ့သူမှာ ရဲနောငျ၊ ဇငျ ကွီးနှငျ့ ယှနျးတို့သုံးဦးမှ တဈဦး ဖွဈနိုငျမညျဟု ခနျ့မှနျးနကွေ သညျ။